Okokulondolozeka Kwezwe Okuphathelene Nezizwe Zonke - Thumela RELAY
UKUPHILA KWEMPILO WEZOBUCIKO AMACEBISO nezinye CINEMA amadili UKUZIJABULISA
Abasubathi: Umdidiyeli waseFrance uVolinin Lavillenie ubengeke ahlanganyele emhlanganweni weLigue de…
Tchinde Agasti 15, 2020 0
UNdunankulu waseFrance uValein Lavillenie umemezele ngoLwesihlanu ukuthi uvivinywe ukuthi une-Covid-19 nokuthi ngeke abambe iqhaza emhlanganweni obuseMonaco Diamond League kusihlwa. UValein Lavillenie ongumPhathi wasesigodlweni umemezele…
I-LDC: IBayern Munich ibhekene neFC Barcelona ithola ithikithi layo kumidlalo yamanqamu.
Ngemuva kokuthola iziqu zeParis Saint-Germain neRB Leipzig emidlalweni emine yokugcina yeChampions League, iFC Barcelona neBayern Munich bangenele lo mbango wangoLwesihlanu ukuthola ithikithi lesithathu kumanqamu.
I-Covid-19: UTrump ubeka ingcindezi kubakhiqizi bezidakamizwa nabagomela
Ukuhamba kukaTrump kufaka ingcindezi kubathengisi bezidakamizwa, kufaka phakathi iModerna, ukufeza imigomo ephezulu. Izwe laseMelika ...
Ngemuva kwe-United States, i-United Kingdom ne-Australia, i-India imemezela…
I-United States, United Kingdom kanye ne-Australia baphinde baphakamisa nokukhathazeka ngezinsongo zokuphepha ezisabisa ezinkampanini zobuchwepheshe zaseChina. Izinkampani zase China i Huawei Technologies Co ne ZTE ...
Lapho isithombe sasiyisikhali e-Algeria - Jeune Afrique
TELES RELAY Agasti 14, 2020 0
U-Mohamed Kouaci ngaphambili ngaphambili ngakwesokudla, umngcele osempumalanga ye-Algeria cishe ngo-1961. © © Mohamed Kouaci Ngesikhathi sempi sase-Algeria, bobabili...
Izimali zempesheni ngokungaqiniseki
Amasheya nama-bond, umthombo oyisisekelo wembuyiselo yesikhwama sempesheni, akaqinisekile. I-Afrika ayihlukile emthethweni wamazwe anezimali zempesheni. Kulabo abangenayo ngempela, izinto zizoba ziningi ...
U-Othman Benjaminelloun indoda yakho konke!
Tchinde Agasti 14, 2020 0
Umphathi weBMCE Bank Of Africa naye ukhona ezigabeni ezikude kakhulu nendawo yakhe yokududuza ... Ngokuthola kwefa elinganiselwa kumadola angaphezu kwezigidi eziyinkulungwane, u-Othman Benjaminelloun ungomunye wabacebile bokuqala baseMorike nase ...
Ukukhiqizwa kukotini waseCameroon kukhuphuke ngamathani ayi-156 (+ 000%) ekugcineni komkhankaso ...
Ukukhiqizwa kukotini waseCamalia kukhuphuke ngamathani ayi-156 (+ 000%) ekugcineni komkhankaso wamanje, ophela ngoMeyi 22. Ukusebenza ngenxa yokukhuphuka kwesivuno. ICameroon ikhiqize amathani angama-22 ...
ECameroon: ISodecoton, isinyathelo esibalulekile sokuhlangabezana nenselele yokukhiqizwa okwandayo.
I-heavyweight eGolden emhlophe, inkampani ithole ingxenye yama-euro ayizigidi ezingama-65 adingekayo ukuvuselela izikhungo zayo. Isinyathelo esibalulekile ekuhlangabezaneni nenselele yokukhiqizwa okwandayo. Okuyinhloko ...
I-Angola: U-Isabel dos Santo uhoxa ebhodini labaqondisi bendatshana yombuso wakhe
Usomabhizinisi lo usethathe umhlalaphansi ebhodini labaqondisi bendawo yombuso wakhe, eyabuswa nguSonangol, inkampani kazwelonke kawoyela. Kuqala okungokomfanekiso. Esitatimendeni sabezindaba sithunyelwe ngo-Agasti 11, ...
1 2 3 ... 226 olandelayo
Lapho ukuvela kube yifa
UKhaled Drareni: ukugwetshwa kwentatheli kukhuphula ...
Iphimbo labalingiswa abavela ku-Telenovelas 3 - Video
[Usezingeni] Lapho iziqhwaga telecom zishona ezinye ...
UJohnny Depp: Lolu sizo Olusizo Oluvela KuVanessa Paradis - Ividiyo
I-xnxx: Nazi izinto eziyi-10 ezenziwa abesifazane embhedeni ezenziwa amadoda ...
Emmanuel Macron osengozini
XNXX: Nazi izinto eziyi-10 eziyisiphukuphuku abesifazane abazenza embhedeni ukuthi ...
XNXX: Kungani sifuna ubulili futhi senze uthando lube ngaphezulu ...
Udlwengula intombazane eneminyaka engu-16 ubudala emiphongolweni ngemuva komhlangano o ...
XNXX: Owesifazane uveza ukuthi inja yakhe ibingumngani wakhe omkhulu ngoba ...
Uqeda impilo yakhe ngokulengiswa; uthisha wakhe wagcina ...
Intombazane eneminyaka engu-19 ubudala yagwazwa amahlandla angu-15 naye ...
XNXX: Ngacela umkami ukuthi alale nendodana yethu ku…
Ukushaqeka kabili nge-CMA CGM ngemuva kokuqhuma kwechweba…
Okwangaphambilini Olandelayo 1 kwezingu-43